သငျသညျလာမည့်ကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်လိုပါသလား? - ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မတ်လ
ပင်မစာမျက်နှာ » သငျသညျလာမည့်ကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လတွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်လိုပါသလား?
ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အကြမ်းမဖက်များအတွက်ကမ္ဘာ့မတ်လသူ၏ဒုတိယခရီးဟာ22019 အောက်တိုဘာလဆောင်ရွက်ရန်လိမ့်မယ်တဲ့လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ဖလားချီတက်ယခုနှစ် 2009 တှငျကငျြးပခဲ့နှင့်အားတက်စရာအောင်မြင်ခဲ့သည် ထက်ပိုမို 400 မြို့ကြီးများအတွက်အကြောင်းတထောင်ဖြစ်ရပ်များ။ ဒုတိယကမ်ဘာမတ်လအဓိကမှတ်တိုင်နှင့်တွေ့ဆုံရန်နှင့်ကျော်လွန်မှပြန်လာချင်ပါလိမ့်မယ်။
ထိုသို့အသစ်အတွေဟာလည်းဒီသစ်ကိုပဏာမ join ဖို့မရှိမဖြစ်အရေးပါသည်။ သင်သည်ထိုသူတို့၏တဦးတည်းအနေနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်ကျွန်တော်တို့ကိုသိရန်လိုလျှင်, ငါတို့သည်သင်တို့အထဲတွင်ကွဲပြားခြားနားသောဆောင်းပါးများကိုဖတ်ဝဘ် browse ဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
နောက်တဖန်ဒီပဏာမခြေလှမ်းကိုထောကျပံ့ဖို့ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအလုပ်လုပ်ချင်သောငါတို့သည်ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာ, တစ်ဦးချင်းမဆို entity, အသင်းအဖွဲ့သို့မဟုတ်စုပေါင်းမှပွင့်လင်းကြသည်ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အကြမ်းမဖက်ဘို့ကမ္ဘာ့ဖလားမတ်လကတည်းက။ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းချီတက်22019 အောက်တိုဘာလစတင်မည်နှင့် 8 2020 မတ်လအဆုံးသတ်ရေး, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းသွားလာကြလိမ့်မည်။
တစ်ဦးချင်းစီသို့မဟုတ်အသင်းအဖွဲ့များကလူခရီးစဉ်များလက်ထက်၌စဉ်အတွင်းအပြိုင်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်ပွဲကျင်းပအတွက် join ဒီလှုပ်ရှားမှုထဲမှာထင်ဟပ်လျက်ရှိသည်ကြောင်းကိုဒီပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပဏာမပြောဆိုချက်ကိုအတူ။
ယူအားလုံးသည်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်လုပ်ရပ်များ non-profit, ဆိုလိုသည်မှာမျှစီးပွားရေးမက်လုံးပေးအဲဒီမှာဖြစ်ပြီး, ဘက်တော်သား၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်ကို run သင့်ပါတယ်ဖြစ်ကြသည်။
ကျနော်တို့ကိုရှာခြင်း အကြောင်းရင်းမှကျူးလွန်အသင်းအဖွဲ့များသို့မဟုတ်တစ်ဦးချင်းစီ သူစီစဉ်နှင့်အတူဆက်သွယ်ရေး၏တိုက်ရိုက်လိုင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်ကိုဖန်တီးရန်အလိုရှိ၏။
အဆိုပါလှုပ်ရှားမှုများကြောင့်လူ (ကလေးများသို့မဟုတ်လူကြီးများရှိမရှိ) ဖြစ်ခြင်း၏တစ်ဦးလုံလောက်သောအရေအတွက်က join ဖို့ရာထူးတိုးခံရဖို့, အနည်းဆုံးအား 20 စံပြသင်တန်းသားများ.
သငျသညျပါဝင်ဆောင်ရွက်ချင်ပေမယ့်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်လှုပ်ရှားမှုတစ်ရပ်စိတ်ကူးရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ငါတို့စတင်ခဲ့ပြီးနိုင်သောအရာကိုအချို့ကိုဥပမာအကြံပြုရန်သင့်အားဆက်သွယ်ပါလိမ့်မယ်။ အကယ်. ဒါပေမယ့်အဆိုပြုချက်လည်းပြင်ဆင်ခြင်းနှင့်လုံးဝအရေးယူမှု၏ခေါင်းအားဖြင့်အကူအညီမသူတို့ကမတ်လများ၏တန်ဖိုးများ၏မူဘောင်အတွင်းထောက်ပံ့
သင့်ထံမှသွားရမယ့်နေ့ရက်ကိုရှေးခယျြဖို့တောင်းနေကြတယ်22019 မတ်လမှ 8 2020 အောက်တိုဘာလအရှင်ရှေးခယျြသောလှုပ်ရှားမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်ထွက်သယ်ဆောင်ခံရကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအလုပ်တခုကို၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ကျနော်တို့သဘောတူရက်စွဲပေါ် မူတည်. လှုပ်ရှားမှုကိုအဓိကချီတက်ပွဲ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်လိမ့်မည်, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးအလယ်တန်းဂီယာ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။
ဒါဟာ (ကအမြင်အာရုံထောက်ခံမှုပစ္စည်းရှိသည်ဖို့အမြဲအရေးကြီးသည်ဓါတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများ), သူတို့အရှင်သည်ဤသမိုင်းဝင်နေ့၏စံချိန်တင်အတွက်ဝဘ်နှင့်အဖွဲ့အစည်း၏လူမှုရေးကွန်ရက်များပေါ်တွင်မျှဝေနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်။
လှုပ်ရှားမှု join ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
အားလုံးပုဂ္ဂိုလ်များသို့မဟုတ်ကျွန်တော်ကိုအီးမေးလ်ကနေတဆင့်ဆက်သွယ်နိုင်အောင်သာသင့်ရဲ့အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုပါဝင်ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်စွန့်ခွာဖို့ဒီ button ကို click ရန်လိုအပ်, ထိုနေ့ရက်ရှည်ချီတက်ပွဲစဉ်အတွင်းသေးငယ်တဲ့ဖြစ်ရပ်များသို့မဟုတ်လှုပ်ရှားမှုများကိုဖန်တီးရန်ကျူးလွန်လိုသောအသင်းအဖွဲ့များ, ဒါကြောင့်လိုအပ်သောအကျဉ်းချထားရမည် ကျနော်တို့လုပ်ဖို့လှုပ်ရှားမှုများတချို့စိတ်ကူးများအကြံပြုနိုင်ပါတယ်။
အတွက် join နှင့်ဤ join လှုပ်ရှားမှု!
ဂီယာအသစ်ကိုမထွက်မချင်းခေတ္တပိတ်ထားသည်။ သင့်တွင်မေးခွန်းများရှိပါကသင်ဆက်သွယ်နိုင်သည် info@theworldmarch.org